Joe Jonas နဲ့ စေ့စပ်ရတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ Sansa Stark (သို့) Sophie Turner – SoShwe
Home/Entertainment/Joe Jonas နဲ့ စေ့စပ်ရတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ Sansa Stark (သို့) Sophie Turner
Joe Jonas နဲ့ စေ့စပ်ရတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတဲ့ Sansa Stark (သို့) Sophie Turner
admin March 28, 2019	Entertainment Leaveacomment
HBO က ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့ Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ လူသိများ ကျော်ကြားလာတဲ့ Sansa Stark အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Sophie Turner မှ သူမအနေနဲ့ Joe နဲ့သာ မတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးဆိုရင် တစ်သက်လုံး အပျိုကြီးဖြစ်တော့မယ့်အကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး Sophie အနေနဲ့လည်း ခင်ပွန်းလောင်းဖြစ်သူ Joe နဲ့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ စေ့စပ်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်း တော်တော်လေးစဉ်းစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Joe မှ Sophie ကို Propose လုပ်တုန်းက Sophie အနေနဲ့ ၂၁ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပြီး “ ကျွန်မအနေနဲ့ တစ်ဘဝလုံး တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် . . . ” ဆိုပြီး Joe ကို ပြန်လည် တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီိဖြစ်တဲ့ Sophie မှ သူမအနေနဲ့ Joe နဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်း သူမရဲ့ လက်တွဲဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရှိလာခဲ့တဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး Joe နဲ့ မတွေ့ဆုံခင်တုန်းက ပေါ့အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ Justin Bieber ကို Crush ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous Lady Gaga ရဲ့ အချစ်သစ်က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ? ? ?
Next အသက် ၃ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးရဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှ ချစ်စဖွယ်အပြုအမူ။